Shiinaha SLA-310 Dhalada Wareegga Mashiinka Calaamadda Tooska ah Warshad iyo Warshad | S-conning
S310 Nidaamka quudinta toosan iyo calaamadeynta ayaa ku habboon: calaamadeynta otomaatiga ah ee weelasha baakadaha silsilada leh ee dawooyinka, kiimikada maalinlaha ah, iyo warshadaha cuntada
- Buugga gacanta oo dhan oo si toos ah u raritaan ah, ama xitaa si otomaatig ah u gaarsiinta iyo calaamadeynta khadka buuxa.
-Intay u kala soocid xawaare sare oo taagan.
Quudinta toosan waxay ka dhigeysaa mid ku habboon in la dhex dhigo maaddooyinka, iyadoo si weyn u yareyneysa xoogga shaqaalaha iyo hagaajinta waxtarka.
- Fijaanno ama dhexroor kale: -20-90mm, dherer: 30-200mm dhalooyin wareegsan oo yar yar oo wareega wareega ah ayaa lagu qalabeyn karaa u leexin quudin
Ku kala qaybi dhalada: Furku wuxuu kala soocayaa dhalooyinka isla waqtiyo siman wuxuuna galaa xarunta calaamadeynta; rullaluistemadka xiddigga iyo dhalada fuusha dhalada waxay hirgelinayaan meeleynta saddexda sadar ee jirka dhalada si loo hubiyo saxnaanta calaamadeynta; calaamadeynta toosan ayaa dhameystiri karta inkjet, ogaanshaha inkjet, Maqnaanshaha ogaanshaha calaamadaha, diidmada alaabooyinka aan u qalmin, iwm.
Suunka ruxruxa: Waxaa wada matoor gooni ah waxaana si isdaba joog ah loogu hagaajin karaa beddelidda soo noqnoqoshada.
Xawaaraha calaamadeynta, calaamadeynta waa mid qumman oo aan laalaab lahayn, waxaana loogu talagalay inay si wax ku ool ah uga hortagto dhibaatooyinka sida maqnaanshaha, khaldan, iyo dib-u-dhajinta ee laga yaabo inay sababaan liiska duubka.
* Mashiinka calaamadeynta oo dhameystiran wuxuu qaataa SUS304 birta birta ah iyo xoojinta sare ee aluminium ee u hoggaansamida cGMP, FDA, OSHA, CSA, SGS, iyo CE.
Emery gawaarida gawaarida
Gawaarida gawaarida waxaa laga sameeyaa maaddada dahabka birta, taas oo leh khilaaf sare oo aan waligood dhicin, hubinta saxsanaanta joogtada ah ee gaarsiinta calaamadda. Qalabka birta dahabka ah waa mid aad u adkeysi badan, waxayna ka guuleysataa siibashada iyo socodka calaamadda marka caag ama bir si fudud loo xirto. Dhacdo qayb ah.
Mashiinka kuleylka kulul: wuxuu qaataa summadaha pneumatic-xawaaraha sare leh, xawaaraha ugu badan wuxuu gaari karaa 500 jeer daqiiqadii. Isku hagaajinta azimuth waxay qaadataa hagaajinta furitaanka, taas oo sahlan oo ku habboon hagaajinta gacanta.
Xulashada daabacaadda inkjet-xalinta sare ee HP ee daabacaadda khadka tooska ah ee saddexda waji ee koodhka
1-20ml 7-20ml ampoule, fijaanno, cabitaano afka ah, iyo alaabada kale ee dhalada wareega oo cidhiidhi ah, qalab kufiican calaamaynta dhakhsaha iyo otomaatiga ah iyo daabacaadda baakadka.
Cabbir L2100mm × W1230 × H1400mm
Cabbirka weelka dhexroor ： Ф28-120mm
Xawaare 20-120 Dhalo / daqiiqad (waxay kuxirantahay cabirka dhalada iyo dhererka calaamada)
Hore: Iibinta Kulul ee Shiinaha Nidaamka Calaamadeynta otomaatiga ah ee naqshadeynta cusub ee duritaanka horay loo buuxiyay ee Baarka Torsion Bar Isku-darka otomaatiga ah
Mashiinka Codsadaha Label ee Khaanadaha, Nidaamka Syringe iyo Nidaamka Calaamadaha, Top Iyo Labeler Labeler, Daabacaha Label Dhalooyinka Qurxinta, Mashiinka Mashiinka Balaastikada, Mashiinka Calaamadaha Dhalada Ganacsi,